Lalao Olympika (JO 2016) : nahazo 2.500 Euros i Saholinirina Eliane | NewsMada
Lalao Olympika (JO 2016) : nahazo 2.500 Euros i Saholinirina Eliane
Noho ny vokatra tsara azony, ka nahafahany miatrika ny lalao Olympika (JO 2016), nahazo lelavola fanampiana avy amin’ny Confejes, i Saholinirina Eliane. Hojerena kosa ny amin’ireo atleta hafa.
Ho fanomanan’ireo atleta tafita amin’ny lalao Olympika (JO 2016), hatao any Brezila, nanome fanampiana ho azy ireo ny Confejes. Anisan’ireo nahazo izany, i Madagasikara, amin’ny alalan’i Saholinirina Eliane, eo amin’ny taranja atletisma. Lelavola 2.500 Euros, no azony, ho amin’izany. Io no nambaran’i Ali Harouna, sekretera jeneralin’ny Confejes, nandritra ny fanokafana ny andiany faha-30, amin’ny fivorian’ireo minisitra mivondrona ao anatin’ny komisionan’ny tanora sy ny fanatanjahantena aty amin’ny ranomasimbe Indianina (CJSOI), natao teny amin’ny Paon d’Or Ivato, omaly.
Nolazainy fa firenena 40 mpikambana ao amin’ny Confejes, no nangataka izany saingy dimy ihany no nisitraka azy ka ny roa avy amin’ny faritry ny ranomasimbe Indianina, dia i Maorisy sy Madagasikara. Atleta telo ny an-dry zareo Maorisianina ary tsy nisy afa-tsy iray kosa ny an’i Madagasikara. Tsy anisan’ireo nahazo izany, Ratiarison Asaramanitra, izay tafita hiatrika ny JO ihany koa.
Manoloana izany, nilaza ny minisitry ny Fanatanjahantena, Andriamosarisoa Jean Anicet, fa tsy misy idiran’ny minisitera, ny mahakasika io vola io fa an’ny Com. Nomarihiny kosa fa tsy maintsy hisy ny fanampian’ny fanjakana ho an’ireo solontena malagasy. Ankoatra izay, fantatra fa mbola hisy fifampiresahana eo amin’ny roa tonta, handinihina, izany.
Mandra-piandry izany, natao omaly ny andiany fahatelo amin’ny fivorian’ireo minisitra ao anatin’ny CJSOI.
Fotoana, nandinihana ny olana eo amin’i Kaomoro sy Mayotte ary ny lalàna mahakasika ny lalaon’ny CJSOI. Notanterahina tamin’io koa ny fifidianana izay ho filoha hitantana ny CJSOI, ho an’ny taom-piasana manaraka.